"Dmitrovsky baradho": xilli 2021 - "Nidaamka Baradhada" magazine
Sergey Averin, agronomist Dmitrovsky Baradhada LLC
Beertayada - LLC "Dmitrovsky baradhada" - waxay ku taallaa degmada Nekrasovsky ee gobolka Yaroslavl. Madaxa shirkadda waa Alexander Alekseevich Pilipchuk.
Beertu waxay ku takhasustay soo saarista baradhada shinnida. Faafinta abuurku waxay ku bilaabataa minitubers waxayna ku dhammaataa jiil caan ah. Shirkaddu waxay la shaqaysaa ururada sida LLC LVM RUS, HZPC Sadokas, Stet Rus LLC. Shirkaddu waxay u shaqeysaa sida uu qabo tignoolajiyada Dutch-ka, beertu waxay ku qalabaysan tahay tiro badan oo ah cagaf-cagafyada John Deer, iyo qalabka GRIMME ayaa sidoo kale jooga: beeralayda baradhada, beeralayda baradhada (oo ay ku jiraan Varitron 270 iskii u goosta). Shirkaddu waxay leedahay qalab bakhaar oo casri ah oo buuxa: waxaa jira bakhaarro (helitaanka baradhada beerta), suumanka gaadiidka.
Beerta ayaa horumaraysa, sannad kasta waxa ay kordhisaa mugga meelaha beerashada, waxa ay ku hawlan tahay dhismaha kayd cusub oo lagu kaydiyo alaabta abuurka.
Sannadkii 2021, beertu waxay u qoondaysay 271 hektar baradhada, dalaggu wuxuu ahaa ilaa 9214 tan, celceliska wax-soo-saarka wuxuu ahaa 34 tan / ha.
Laakiin ma caawin karo, laakiin xusuusnow: sannadku wuu ku adkaaday gobolka Yaroslavl oo dhan, kulaylku wuxuu ahaa ku dhowaad dhammaan xilliga sii kordhaya ee baradhada. Qoyaanka la'aanta waxay si xun u saamaysay koritaanka iyo horumarinta dhirta, si xun u saameeya tuberization. Laakiin sidoo kale waxaa jiray pluses: sababtoo ah heerkulka sare iyo abaarta, boqolkiiba infekshanka dhirta ayaa hoos u dhacay, beeraha ma jirin wax daahyo ah, beddelaad, kaliya calaamado go'doon oo qolof caadi ah iyo silvery ayaa la xusay, laakiin sida ay yiraahdaan, tani waa kaliya "cilad la isku qurxiyo".
Guud ahaan, waxaan dhihi karnaa in xilli-ciyaareedka uu u soo baxay inuu noqdo mid hooseeya, laakiin tayada baradhada ayaa ah heerka ugu sarreeya.
Tags: baradho korayaGobolka Yaroslavl
ShareShare51Share37Si aad u soo diri
Solana waa shirkad qoysku leeyihiin oo taranta iyo soo saarista abuurka baradhada tan iyo 1905, si taxadar leh u ilaalinaysa caadooyinka ganacsiga iyo gudbinta khibradaha ...
Saynis yahanada Ural ayaa soo saaray tignoolajiyada kordhinaysa wax-soosaarka baradhada